China Ingulube Gelatin ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Impahla eluhlaza ye- inyama yengulube i-gelatin ihlukile kuneye-gelatin yezimboni. I-gelatin yengulube idinga ukucutshungulwa ngezikhumba zezingulube ezintsha ezingavunyelwe, ezihlukanisiwe ngaphandle kokwelashwa kwamakhemikhali. Akuvunyelwe neze ukusebenzisa noma iyiphi imfucuza ngemuva kokushuka esikhunjeni, futhiI-gelatin yengulube iyomiswa futhi ichotshozwe kulayini wokukhiqiza ovaliwe ngokuphelele.
Ngenxa yezizathu ezilandelayo, i-gelatin yengulube ingahlangabezana nezidingo zemakethe zelebuli yokuhlanza
I-1. inokulandelwa okusobala nokubonakala okusobala
2.Support inhlalakahle yezilwane
3.Ingaba nomthelela ekuchithekeni okungu-zero nakumnotho oyisiyingi
7.Ifanele imikhiqizo edinga "ilebuli yemvelo"
Ngokubheka i-gel yayo ehlukile nezakhiwo zokuqina, i-porcine gelatin isetshenziswa kakhulu ngabakhiqizi bokudla nabapheki bezindawo zokudlela. Emhlabeni jikelele, kunabathengi abaningi abapheka i-gelatin ekhaya.
IGelken porcine gelatin ithengiswa kabanzi emazweni amaningi, njengeThailand, iVietnam, iNingizimu Melika njalonjalo. Sithola impendulo enhle kakhulu evela kumakhasimende ethu ngaphandle kwesikhalazo nokukhumbula.
I-gelatin yethu yesikhumba sengulube yenziwe ngesikhumba esisha, inensimbi esindayo futhi ayinakho ukungcola, ngokukhanya okuphezulu, isithwathwa esiphezulu kanye ne-viscosity ephansi. Sisebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni i-gelatin yesikhumba sezingulube enezinto ezahlukahlukene, ezifakwe kabanzi kumaswidi, i-dessert, imikhiqizo yobisi, inyama, izinto zokusetshenziswa, iziphuzo, umsoco nezimakethe zezempilo.
Singanikeza i-pigatin yesikhumba kusuka ku-80 kuya ku-280 ukuqhakaza, futhi i-mesh ye-pigskin gelatin inganikezwa kusuka ku-8 kuya ku-80 mesh
Umkhiqizo wethu omuhle we-porcine gelatin unganikeza umphumela omuhle kakhulu wokuqandisa kubo bonke abapheki nabapheki abasha. Lokhu kulula ukuphatha futhi okulula ukusebenzisa i-gelatin kungakunika uchungechunge lwezixazululo zesevisi yokudla ekhangayo.
Langaphambilini I-Kosher Gelatin
Olandelayo: I-Gelatin 40 Mesh